Dr Ililtaa Naggaa: ‘’ Takka takka maal ta’a osoo guyyaan tokko guyyaa lama ta’e nan jedha’’ - BBC News Afaan Oromoo
Dr Ililtaa Naggaa: ‘’ Takka takka maal ta’a osoo guyyaan tokko guyyaa lama ta’e nan jedha’’
Dr. Injinar Ililtaa gaafa naan jedhan takka takka sodaatu natti dhagahama. Barumsa gosa lamaa barachuukoollee namni baay'een akka baru waan hinbarbaanneef fayyaa akkan baradhu qofan dubbadha ture.
Dhaloonnikoo magaalaa Bishooftuudha. Amajjii dhufu umuriin koo 29 ni taha. Achumatti guddadhes. Hanga kutaa 12 illee achumatti baradhe. Akkuma 12 xumureen Yunivarsiitii Maqaleetti barnoota fayyaa(medicine) seenus wanti yaade naaf milkaa'u dhabe.
Yunivarsiitii mootummaa ta'un isaa jireenya doormii dabalatee reefu maatii irraa waan adda baheefillee naaf mijatu dhabe. Nyaannis naan hin mijanne.
Barumsa tokko irratti qabxiin nujalaa bade jennaan barsiisaan nu barsiisu barumsa kana barachuun isiniif hin malu nuun jedhe jennaan nan aare.
Dhamaatii waggaa sadii
Ijoollummaa koo irraa eegale fayyaa (medicine) barachuu nan fedha ture. Ta'us barsiisaa waliin waliigaluu waan dhabef erga Maqaleetti waggaa sadii baradhee booda itti hin fufu jedhe.
Warrakootti himeen tasa asitti hin baradhu jedhee dhiiseen dhufe. Barsiisicha barumsa kana fixee deebi'e akkan isa aarsu yaadaa waanin turef isa loluuf hin feene.
Egaa ergasiiti gara Finfinneetti deebi'e Koollejjitti Medikaalaa Beetelitti fayyaa barachuu kanin eegale. Achis barumsa Siivil injinaringii sagantaa galgalaan Kolleejjii Addisitti barachuu jalqabe.
Miiltoowwan koo irraa dubbatti hafun nama gaddisiisa. Wanti miiltoowwan koorraa adda na godhu garuu koorsii dabalataa fudheera. Barumsa injinaringii abdii guutuun kanin barachaa ture kanaafi.
Lamaan isaa maaliif
Hiryyoonnikoo barumsi injiineringii siif taha naan jedhu ture. Anis herreegaa fi fiiziksii baay'ee waanan jaalluf, lamaan isaa immoo injineringiin of keessaa qaba waan ta'ef itti cichee baradhe.
Gosa barnootaa garaa garaa ta'un isaa na hin dhibne. Fayyaa barachuun dubbisuufi shaakala gaafata. Injinaringiin immoo dubbisuun alatti shallaggii qaba. Kanammoo nan jaaladha.
Yeroo dubbisuun natti baay'atu gara herreega kanaattii garagale nan hojjedha ture. Kanaaf, inumaa hin tole malee walitti najalaa hin buune.
Yeroo hundaa garuu akkas hin turre. Maal ta'een kanatti seene jedhee yeroo baay'ee of gaafadheera. Qormaatni yeroo hedduu walirra najalaa bu'eera. Halkan guutuu osoo hin rafin lamaan isaa qo'achuuf yeroon dabarse ni ture.
Nuffee fa'i yeroo tokko dhiisuun qaba jedhee yaade dhuma koo ilaale maaliifin jedhe itti fufa.
Barumsa fayyaa xumuruuf waggaa 6fi walakkaa gara torba akka jechuuti najalaa fudhateera. Injineringii immoo waggaa 5fi walakkaa najalaa fudhate.
Yeroon baay'ee nama hanqata. Gaaf kaan barumsi fayyaa na muddu isa tokkoon boqonnaa nan argadha. Yeroos ittiin fayyadama. Yeroo qormaanni gahu garuu baay'een dhiphadha.
Yoo hirribni natti dhufe nan rafa garuu ka'eemmoo nan dubbisa. Yeroo qormaanni barnoota lamaanii walirratti bu'e garuu, hirriba na dhowwata. Yeroo itti hin rafne fa'itu jira.
Fayyaa nan caalsifadha isuma barachuu waanan yaadaa turef. Yeroo koo gara caalus isatu na jalaa fudhate. Kanaan dura wanti na mudate waan jiruf itti caalsifadheera.
Barumsa Maqaleetti hin dandeessu jedhame ture asitti baradhee irra aaneera.
Deeggarsa maatii guddaa nan qaba. Yeroon barumsa injineringii eegalu maatiinkoo mormani ture. Dhiisi, sitti ha hafu, sitti ulfaata kan jedhan turan.
Boodarra itti cimnaan na deeggaru eegalan. Barattonni injineringiifi obboleessikoo elektirikaal injinaringii barate na gargaaraa turan.
Waan namoonni jedhan
Mala taate? Si dhukkubaa? Barumsi fayyaayyuu ulfaataadha maaliif kana eegalta? Namoonni waan hedduu naan jedhan. Erga xumuree booda miira bareedaa waan qabaatuf waan nama rakkisu keessa bahun namatti tola.
Wanti guddaa itti ulfaate
Inni guddaan yeroon baay'ee nama hanqata. Takka takka maal ta'a osoo guyyaan tokko guyyaa lama ta'e nan jedha. Qormaanni walirra oola. Kunimmoo, baay'ee nadhiphisa. Hirribas nadhowwa. Guyyaan itti boo'es ture. Maatii waliin baay'ee walarguun na rakkisa ture.
Amma as gahee yeroon argu baay'een gammada. Bagayyuu barumsakoo adda hin kutin nan jedha. Namni barumsa tokkootti yeroo eebbifamullee nama gammachiisa. Lamaaniin xumuruu koottimmoo guddaa na gammachiseera.
Fuuladuratti barnoota lamaanin hojjechuu nan barbaada.
Yeroo shaakalaa adeemsi hojii hospitaalota rakkoo akka qaban argeera. Reeffi namaa mana yaalaati yeroo ba'u dhukkubsataafi dhukkubsachiisaa gidduu baha. Kuni sirrii miti.
Isa dhukkubsachiisuufs ta'e dhukkubsataaf dabareen kankeeti yaada dabarsu qaba. Kanaaf, balballi biraa jiraachuu qaba.
Waggaa torba keessa digirii lama argadhe. Waggoota dhufanitti ammallee barachuu nan yaada. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e injineringiin maastarsii hojjechuu nan barbaada. Fayyaatin immoo ispeeshaalistii lafee barachuuf yaada qaba.
Hospitaala Raas Dastaatti yeroon hojjedhu ispeeshaalistiin lafee Dr. Salaamu jedhamu of kennee yeroo hojjetu arge jennaan faana isaa hordofuuf yaade.
Barumsa fixnee shaakalli akkuma eegalleen dhukkubsattoonni hedduun maal isin dhukkube jedhee osoo gaafadhu 'sistar' jedhani nu waamu turan.
Jara dhiiraa narsii ta'an garuu doktar jedhani waamu ture. Gara jalqabaa nama aarsa ture. Boodarra garuu, nan bare. 'Sistar' gaafa jedhan yoo jechuun eegale.
Hiriyyoonnikoo garuu baay'ee aaru ture. Doktaroota waliin osoo jirru 'Sistar' gaafa nuun jedhan dokaroonni gameessi immoo doktara jedhaa waamaa jedhani itti dheekkamu ture.
Nan bashannana. Yeroo hedduu garuu gaafan qormaata fixu bashannana. Amma hanga ramaddiin taasifamutti kilinika dhuunfaa keessatti hojjechaa jira.
Haatikoo baay'ee natti gammadde. Yeroo nama waliin walnabarsiistullee Dr. Injinar naan jetti. Yeroon Maqaleedhaa deebi'e fulli ishee fi kan ammaa garaagara. Harmeenkoo anatti boontee akkana dubbachuun ishee na boonsa.
Ani gaafan jalqabu hin dandeessu jedhame. Garuu, waan namni jedheef miti. Ofumaa ilaaluu waan barbaadeefi. Kanaafuu, wanti hin danda'amne hin jiru. Fedha Waaqaa hanga ta'utti dhama'uu qabna.
Waan ta'u barbaannu, hanga dandeenyu yaaluu qabna. As gahuuf hedduun qorame. Garuu, xumurakoo nan ilaala ture.
Dubartootarraa wanta hedduutu eegama. Kanaaf, haa yaallu. Namaaf jennee abjuu keenya dhiisuu hin qabnun jedha.
Viidiyoo, Dubartoota Afrikaa Addunyaa Jijjiiran, Nehaandaa
Viidiyoo, Haadha miiliyoonotaa Dr Abbabach Goobanaa
Viidiyoo, Haadha deessee guyyaa shan geesseef sirna addaa taasifamu
Viidiyoo, Dahee guyyaa 6ffaatti mucaa koo baadhee hojii listiroo eegale